Safiirka Somalia ee UN-ka oo aan haysan Xasaanad Diblomaasideed, Ogoow Sababta. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 25, 2017
Somalia waxay dhawaan u magacawday Safiir Cusub Qaramadda Midoobay, hase yeeshee waxay Su’aali ka taagan tahay Qofka isaga oo kale ah sida uu ku yeelan karo Xasaanada iyo Qadarinta Diblomaasiyadeed ee ay leeyihiin Safiiradda la midka ah maadaama uu isticmaalayo Baasaboor aan Diblomaasi ahayn, isagoo ku jira Shaqo Diblomaasiyeed.
Mr. Abukar Dahir Osman (Abuukar Baale) oo haysta Dhalashadda Maraykanka, waxaa loo magacaabay Bishii hore inuu hogaamiyo Ergadda Rasmiga ah ee Soomaaliya u fadhisa Qaramadda Midoobay waxa uu hadda shaqeeyaa isagoo aan haysan Baasaboor Diblomaasi ah, taasoo meesha ka saaraysa inuu Xasaanad ku yeesho Dalka uu ka shaqaynayo. Waxaana Dalka marti galinaya uu ku soo oogi karaa Dacwo si ka duwan Diblomaasiyiinta Dalalka kale u fadhiya Qaramadda Midoobay.
sida uu qabo Xeerka Caalamiga ah, Dadka haysta Baasaboorka Diblomaasiga ah waxay leeyihiin Xasaanad iyo Xaq Dhawr ay ku mutaysteen Marxaladda Diblomaasinimadda, taasoo ay u fududaynaysa inay gutaan Waajibaadkooda iyagoo aan la kulmin Caqabado.
Balse Qofka haysta Baasaboorka Diblomaasiga ah haddii uusan ku imaan Shaqo Diblomaasiyadeed wadanka uu tagayo looma ictiqaadiyo sida Diblomaasiga ah, Waayo waxa uu u safrayaa Dano isaga qaas u ah, taasna kuma helayo Xasaano Diblomaasiyeed.
sida laga soo xigtay Diblomaasiyiin aan la magacaabin oo ku sugan Nairobi, lana hadlay Alleastafrica waxay sheegeen in isticmaalka Baasaboorka Rayidka ah ee Maraykanka (ordinary American passport) ee uu isticmaalayo Madaxa Ergadda Somalia ee Qaramadda Midoobay ay dood ka dhex dhalisay Hay’adaha Dawladda, Waxaana laga wel welsan yahay in arrintan ay keeni karto in la iska indha tiro xasaanadiisa Diblomaasiyadeed, isla markaana ay Booliska awood u leeyihiin inay hubiyaan Dukumintiyadda Xasaasiga ah ee uu la safrayo Safiirka aan haysan Xasaanadda.
sida uu qabo Axdigii Vienna ee 1961 ee Xiriirka Diblomaasiyadeed waxay Safiiraddu leeyihiin Xasaanad dheeriya, laguma dhaqi karo Shuruucda Garoomadda Diyaaradaha ee lagu hubiyo Dadka Caadiga ah, Waxayna leeyihiin Xurmo dheeriya oo ay si aysan dhib dareemin u safri karaan Dadka haysta Baasabooradda Diblomaasiga ah.
Safiir Abuukar waa uu ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo, sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somalia iyana kama soo jawaabin Emails loo diray oo arrintan ay Warbaahintu uga codsatay inay faah faahin ka siiyaan.
Mr. Abuukaar Osman, waxa uu xiriir dhaw la leeyahay Madaxwaynaha Somalia, isagoona soo noqday Agaasimaha Madaxtooyadda ka hor inta aan loo magacaabin Safiirka Somalia ee Qaramadda Midoobay. Waxaana uu Abuukar haystaa Dhalashadda Wadanka Maraykanka oo uu Qaxootinimo ku tagay, si la mida Madaxwaynaha Somalia oo isna ah Somali-American.
Magacaabista Abuukar waxay ku timid isbadal lagu sameeyay Safiiradda qaarkood oo Wasiiro laga dhigay, iyo Qaar Dalka dib loogu soo celiyay. taasoo fursad u siiyay in Abuukar laga dhigo Safiirka Qaramadda Midoobay, halkaas oo Qoyskiisu dagan yihiin,
Sannadihii ugu dambeeyay Somalia oo ka soo kabanaysa Dagaaladda socday Tobanaanka Sanno waxay isku dayaysay inay soo celiso Xiriiradii Diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Caalamka. waxayna soo celisay Xiriiradda Caadiga ah ee Diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Dalal badan.